Chii chinovhara Apple Watch garandi? | Ndinobva mac
Chii chinovhara Apple Watch garandi?
Nezuro takataura nezve garandi nguva yeApple Watch uye nhasi tinoda kujekesa kuti chii chiri kufukidza uye chii chisina kuvharwa neApple garandi. Mune ino kesi, chinhu chekutanga chatinofanira kuratidza ndechekuti zvichienderana nenyika nguva yekuvimbiswa yechigadzirwa inogona kusiyana, saka kana iwe uri mukati meEuropean Union, yako Apple Watch ine makore maviri-yepamutemo garandi.
Kana wachi iri nyowani uye isu takangozvitenga kuchitoro chedu chepedyo cheApple kana kuburikidza newebhusaiti yepamutemo, isu tine mazuva gumi nemashanu ekudzosera chigadzirwa kana isu tisina kugutsikana nekutenga. Chero zvazvingaitika, tichaona kufukidzwa kunouya pasi pewarandi yeApple Watch.
Kutanga, tinofanirwa kujekesa kuti chero vimbiso inovhara kukanganisa kwefekitori yechigadzirwa kubva panguva yainobuda muchitoro. Iyo garandi yakapihwa naApple kuSpain kana dzimwe nyika dzeEU inowedzera kukodzero dzemutemo wekudzivirira vatengi. Kana izvi zvangojekeswa, isu tinoenda neyepamutemo garandi yekuvhara.
1 Kukuvadza kwakafukidzwa pasi pewarandi
2 Zvinokuvadza kunze kwegwaro
Kukuvadza kwakafukidzwa pasi pewarandi
Screen pixel kusagadzikana kana zvakafanana kutadza kwescreen
Kugadziriswa kwekavha yepasi kana pasina humbowo hwekuti kuyedza kwakaitwa kuvhura chishandiso
Condensation pane akadzika maseru anoshandiswa kuyera kurova kwemoyo
Iyo bhatiri ine kukanganisa kwefekitori iyo inodzivirira kuchaja kweiyo yakafanana kana yakafanana
Zvinokuvadza kunze kwegwaro
Apple Watch iri kunze kwenguva inokodzera yewarandi kana nguva yemutemo yevatengi yakapfuura makore maviri emakore muEU
Iyo Apple Watch ine dambudziko risingavharwe newaranti kana mutemo wevatengi, senge kukuvara netsaona (kuputsa, bundu, nezvimwewo) kana kukonzerwa nekugadziriswa kusingatenderwe neiyo mhando
Chero zvazvingaitika, Apple inotarisa izvozvi muChinyorwa 2 vhezheni inowedzera kuramba kwemvura: Iyo Apple Watch Series 2 ine chiyero chekudzivirira mvura kwemamita makumi mashanu yakasimbiswa neiyo ISO 50: 22810 standard. Ichi ndicho chikonzero inogona kushandiswa pamabasa asina kudzika emvura, sekushambira mudziva kana mugungwa. Inogona zvakare kupfekwa mushawa kana mubhati. Nekudaro, iyo haifanire kushandiswa kudhiraivha, kunaya nemvura, kana zviitiko zvinomhanyisa-kumhanyisa kukanganisa kwemvura kana kudzika kwakadzika. Kune rimwe divi, iyo Apple Watch Series 1 uye iyo Apple Watch (chizvarwa chekutanga) inodzivisa mvura uye kupwanya, asi kunyudza haina kukurudzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chii chinovhara Apple Watch garandi?
Ini ndawana, zvakanaka ini ndakakanganiswa nekutadza kweApple Watch iyo inogadzirwa nekushandisa kweichi chishandiso, ini ndine chizvarwa chekutanga Apple Watch uye zvinoitika kuti nekushandisa kwekubata skrini iri kubvisa kubva ku dzimba mune isingasviki gore nehafu yekushandisa, sezvazviri zvakaitika kwandiri ... ndiko kuti, iwachi idzi dzine dambudziko rekugadzira uye ndezvekuti yavo yekubata skrini haifanire kugadzirirwa kushandiswa kweiyo inobata yavo yekubata skrini mune yepakati nguva yenguva. Ini ndaputsa uye kuti ini ndakazvichengeta senge goridhe mumucheka ... iyo skrini inobuda ... Apple inofanira kuiongorora ... sezvo iri dambudziko nemuchina wako.
Ungachinja sei account kubva kwatinotumira email neemail
Flashcards, MoneyWiz, MP4 Converter uye mamwe maapplication ane zvisingaite zvaderedzwa